केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गृहकार्य, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ! « Bagmati Page
केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गृहकार्य, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
शुक्रवार संसदीय दलको बैठक राखेर प्रचण्ड पक्षले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ ।
आफू निकटका सांसदको बैठक राखेर ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय दलको नेता चयन भएपछि प्रचण्डले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन ओलीले बाध्य पारेको बताएका छन् ।
‘बहुमत सदस्यले मलाई संसदीय दलको नेताका रुपमा चयन गर्नुभएको छ । यसलाई मैले चुनौतीको रुपमा लिएको छु । आवश्यक परे ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ,’ प्रचण्डले बैठकपछि भने ।
प्रचण्डले अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने हतार नभएको र अन्य दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘अहिले हामी छलफलमै छौं । संसद विघटन गर्ने कदमलाई अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भनेर सडकमा गएका दलसँग मुद्दाका हिसाबले हाम्रो सहकार्य हुन्छ । छलफलमा छौं, १–२ दिनमा टुंगो लाग्छ,’ प्रचण्डले भने । अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष कांग्रेसको निर्णय कुरेर बसिरहेको छ ।
शुक्रवारको संसदीय दलको बैठकमा १११ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ । ‘अहिले १११ जना सांसदको हस्ताक्षर भएको छ । ४ जना अझै आउँदै हुनुहुन्छ,’ सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने । उनका अनुसार संसदीय दलमा बहुमत पुगेकाले संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई चयन गरिएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलमा समेत बहुमतमा नरहेका प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने जनाएको छ । तर ओलीले राजीनामा दिने पक्षमा नभएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले सहयोग गर्ने जनाए पनि कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छैन । प्रचण्डले भाबी प्रधानमन्त्रीको विषय १–२ दिनमा टुंगो लाग्ने बताएका छन् । कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव नल्याएमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना रहेको बताउन थालिएको छ । यद्यपि यस विषयमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले केही बताएको छैन ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नाम प्रस्ताव गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि पुनःस्थापित नहुँदासम्मको अवधिलाई शून्य समय भनेकाले संसदमा पुस ५ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएर प्रचण्ड–नेपाल पक्ष नयाँ प्रस्तावका लागि कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर जान लागेको छ ।
‘ओलीले गर्न नहुने काम गरेका छन् । संसद विघटन गर्नेदेखि पार्टी विभाजनको सूत्रधार समेत बनेका कारण उनलाई सरकारमा राख्न नहुने अवस्था आएको छ, त्यसकारण कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव लगी प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउनुको विकल्प छैन,’ एक सांसदले भने ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सांसदलाई काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दिएको छ । उनीहरुले ओली समूहमा रहेका सांसदलाई पनि आफ्नो समूहमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालमा महेश बस्नेत र अमित लामाको